Koowheel scooter yombane ukukhuthaza ulwazi lokusingqongileyo wokukhusela - Jomo Technology Co., Ltd
Koowheel scooter yombane ukukhuthaza ulwazi lokusingqongileyo-ukhuseleko
Kukho abaninzi abadumileyo brand hoverboard isithuthuthu , njani Koowheel iye ilinganiswe njengoko top ezilishumi smart scooter uphawu iminyaka eliqela? Nceda uvule ibrawuza yakho Google, uze ndiyayigocagoca amagama " Umthengisi balance scooter ", wafumanisa ukuba domain www.koowheel.com igama kwiphepha lokuqala.
E Century amabini ananye, kunokuthiwa ukuba ukusoloko kuphela utshintsho, kweli xesha ukutshintsha ngokukhawuleza, nokusinda ibali liyazigxumela ukuba sadlala yonke imihla. Kwezoshishino, emva nje kuphela lithetha engqushiweyo, oko kuthetha ukufa, kuphela ezintsha rhoqo ukuze benze ushishino enamandla ngakumbi nangamandla oluhlala ngakumbi. Kushishino isithuthi yombane China uye waba neminyaka engaphezu kwama amabini yophuhliso, ukhuphiswano singene kwisigaba emhlophe ashushu.
Koowheel njengoko yokuqala professional smart scooter uphawu , bekusoloko lwaziwa ezintsha bungwanyalala, umntu ophetheyo wathi lweshishini ayikho ezintsha, akukho nophuhliso. Kwaye ezintsha nje ngeke ukuhlala kwinqanaba lobuchule, kodwa kufuneka ziboniswe ishishini, kodwa sijolise kumava yabathengi ngumsebenzisi-.
Njengoko wonke umntu uyazi, Kodak umboniso, siyiNOKIA mobile phone, zaba ubukhosi ishishini, kodwa ngoku wanciphiswa yimali, kwindawo ngobuso delisting. Isizathu ngokusilela Ilula kakhulu, akukho sunguleni ukomelela nqwelo lweshishini. Era Digital ufikile, smart touch screen mobile phone ifikile, basaqhubeka benandipha ndili elidlulileyo, asikwazi ukuqhelana ixesha elitsha, ukuze amava olungcono nkonzo.
Xa neemfuno ixesha elitsha, ukulungelelana electric isithuthuthu iinkampani kungekuphela nje ukwenza isiphumo olusebenzayo unyango ngamanzi, kodwa ukunikela ingqalelo izinto zefashoni, zidibene ne-bume wabantu, ukwakha ubomi obungcono. Okwangoku, i- Koowheel ukulungelelana electric isithuthuthu leading brands are aware of this, obviously in the direction of continuous efforts.
Ukongezelela, iinkampani ezininzi banolwazi umboleki ukuba sele uyazi imveliso esele ayikwazi ukuhlangabezana neemfuno ezintsha. Le ezintsha kubalulekile, kodwa ezisezantsi kunongeno, enye womelele kakhulu, enokuzisa iinzuzo kunye nozinzo olungaphelelanga. Ngoko ke, lo scooter balance ivili amashishini kufuneka baqhubeke ezintsha ngokungqinelana olunokubakho nemfuno abathengi, iimveliso ezintsha ezifana ngaphandle elingathethekiyo, kulula kakhulu ukuba abe darling omtsha emarikeni.
Ixesha umisela imfuno yabathengi, imfuno yabathengi kugqiba ikamva le mveliso. Xa ixesha ingqikelelo yombane eseleyo isithuthuthu, Koowheel balance sombane scooter ukuba "carbon yokhuseleko eliphantsi zokusingqongileyo, ukuhamba eluhlaza" iimpawu abahlala inzuzo ngokupheleleyo kwesi imveliso, amathuba unlimited.